Skydda dig och andra på somaliska, Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo — Folkhälsomyndigheten
Du är här: Hem / Smittskydd & beredskap / Utbrott / Aktuella utbrott / Covid-19 / Skydda dig och andra / Om covid-19 på olika språk / Somaliska | Soomaali
Skydda dig och andra från smittspridning på somaliska.
Iska ilaali u dhawaanshaha dad xanuusanaya. Markaasi waxaad naftaada iyo dadka kaleba ka ilaalinaysaa in la xanuusado.
Halkan waxaanu kugu siinaynaa talo-bixin ku saabsan sida aad isaga ilaalin karto in cudur kugu faafo.
Masaafada ilaali oo mas’uuliyad shakhsiyan ah qaad
Dadka oo dhan mas’uuliyad ayaa saaran in la hakiyo faafinta covid-19. Ka durug dadka kale markaad joogtid meel gudo ah iyo dibed ah labadaba.
Guriga joog haddii aad xanuusanayso
Gurigaaga ka joog shaqada ama iskoolka haddii aad dareemayso xanuun oo leedahay diif, qufac ama xummad. Markaasi khatar ma gelinaysid in dadka kale cudur ku faafo. Tani waxay khuseysaa xitaa haddii aad dareemayso xanuun aad u yar.
Guriga joog ilaa iyo inta aad dareemayso inaad xanuusanayso. Haddii xaaladaadu sii xumaato oo aanad isku dabari karin daryeelka gaarka ah ee guriga waxaad wici kartaa 1177 si loo helo talo-bixinta daryeelka bukaanka (kuna qoran Iswiidhish iyo Ingiriisi).
Sug ugu yaraan laba maalmood ka dib markaad caafimaado ka hor intaanad dib ugu noqon shaqada ama iskoolka. Adigu dib ayaad ugu noqon kartaa shaqada ama iskoolka xitaa haddii aad leedahay oo uu kugu sii harsanyahay qufac qallalan haddii ay dhaaftay 7 maalmood ka dib markii aad xanuusatay oo aad xor ka ahayd calaamado ugu yaraan laba maalmood.
Dadka waayeelka ah waxay khatar weyn ugu jiraan inay aad u xanuusadaan. Sidaas darteed waxaa muhiim ah in iyadoo aan loo baahnayn la booqdo dadka ku jira isbitaal ama hoyga dadka waayeelka ah. Adigaaga ka shaqeeya daryeelka dadka waayeelka ah maaha inaad tagto shaqada haddii aad leedahay qaar ka mid ah calaamadaha cudurkan.
U feejignow calaamadaha covid-19
Calaamadaha cudurka covid-19 waa ugu horeyn xummad iyo qufac. Xitaa dhibaato neefsiga ah, diif, sanka oo ku cabursan, cuno xanuun, madax xanuun, yalaalugood (lallabood), xanuun muruqyada iyo laabatooyinka ah waa calaamado caadi u ah. Dadka badankooda dhibtu waxay noqotaa mid khafiif ah taas oo keligeed iskaga dhamaata iyadoo qofku isku daryeelo gurigiisa. Dadka qaarkood si khatar ah ayay u xanuusadaan tusaale ahaan dhibaatooyin in la neefsado iyo barar sambabada ah. Haddii aad dareento mid ka mid ah calaamadahan waa inaad iska dhaafto inaad la kulanto dad kale.
Badanaaba dhaq gacmaha
Maadooyinka faafiya faayraskan waa kuwa aad u faafiya cudur oo si fudud u qabsada gacmaha. Waxay sii faafaan marka aad qof gacanta ku salaanto. Sidaas darteed waa inaad badanaaba gacmaha ku dhaqdo saabuun iyo biyo diiran, ugu yaraa 20 il-biriqsi.
Mar kastaba dhaq gacmaha markaad timaado guriga ama markaad timaado shaqadaada ahna ka dib markaad dibeda ku maqnayd, ka hor xilliga cuntada, xilliga la samayo cunto iyo marka musqusha/suuliga laga soo baxo ka dib. Alkoosha gacmaha waxay baddel u ahaan kartaa marka aanad fursad u haysan inaad gacmaha dhaqdo.
Haddii aan la haysan saabuun iyo biyo, waxaad isticmaali kartaa alkoosha gacmaha oo leh ugu yaraan boqolkiiba 60 alkahool ah.
Ku qufac oo ku hindhis laabtada gacanta
Markaad qufacdo ee hindhisto waxaa faafa dhibco yar yar lehna maadooyinka cudurka faafiya kuwaas oo faafin kara faayraska. In lagu qufaco laguna hindhiso laabtada gacanta ama masarka warqada ee sanka waxaad kaga hortagaysaa in cudur faafintan ay ku faafto hareerahaaga ama gacmahaaga. Mar kastaba masarka warqada ee sanka ku tuur dembiilka qashinka oo gacmaha dhaq.
Iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo afka.
Cudurkan wuxuu ku faafaa dhanka xuubabka jilicsan ee indhaha, sanka iyo afka. Sidaas darteed iska ilaalin inaad taabato indhaha, sanka iyo afka.
Informationsblad på somaliska
Ku saabsan faayraska karoona ee cusub iyo cudurka covid-19 (PDF, 197 kB)
Adigaaga ah 70 sano ama ka weyn – xadee dadka aad la kulmeyso (PDF, 444 kB)
Iska ilaali in cudur kugu faafo iyo inaad dadka kale cudur ku faafiso (PDF, 290 kB)
Om covid-19 för gravida
Ku saabsan covid-19 iyo dumarka uurka leh (PDF, 61 kB)
Covid-19 och riskgrupper
Covid-19 iyo kooxaha khatarta ku jira
Haddii aad qorsheyneyso inaad safarto (PDF, 149 kB)
Resa i kollektivtrafiken
Safarka gaadiidka dadweynaha (PDF, 109 kB)
Khad taleefan oo loogu tala galay corona oo ah
Wax dheeraad ah oo ku aaddan sida uu u shaqeynayo ka akhriso
Wac 08-123 680 00
Maalmaha caadiga ah, saacadaha 09.00–12.00 iyo 13.00–15.00
Khadka Telefoonka cusub ee warbixinta Coronavirus oo loogu talagalay dadka ajaanibta ah
Filimada macluumaadka ee ku saabsan faayraska Karoona oo ku baxaya luqado dhowr ah